Kugara neInvestment yeGerman neGold Visa
● Kugara nekudyara kuGerman nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment kuGerman uye Magweta e Kugara patsva neInvestment kuGerman uye ma broker e real estate Residence zvirongwa kuGerman zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Kugara patsva nemaInvestment agents kuGerman kunopa mabasa ekugara nekudyara kuGerman, Residency nemapurogiramu ekudyara kuGerman, Residency nehurongwa hwekudyara kuGerman, yechipiri Residency nekudyara kuGerman, mbiri Residency nekudyara kuGerman, ugari uye ugari nekudyara kuGerman. , Kugara zvechigarire nekudyara kuGerman, Kugara kwechinguva nekudyara kuGerman, Kugara nehurongwa hwekudyara kuGerman, Kugara nehurongwa hwekudyara kuGerman, Citizenship nekudyara kuGerman, Citizenship nemapurogiramu ekudyara kuGerman, Citizenship nehurongwa hwekudyara kuGerman, kechipiri. Citizenship nekudyara kuGerman, hunyanzvi hwekuva Citizenship nekudyara kuGerman, kugara uye ugari nekudyara kuGerman, kugara uye ugari nekudyara kuGerman, zvirongwa zvehupfumi zveGerman, Citizenship nehurongwa hwekudyara kuGerman, Citizenship nehurongwa hwekudyara kuGerman, wechipiri pasipoti kuGerman, yechipiri passp ort zvirongwa kuGerman, yechipiri pasipoti chirongwa kuGerman, mbiri yechipiri pasipoti kuGerman, pekugara uye yechipiri pasipoti kuGerman, repamutemo repasipoti repasi kuGerman, repasipoti repasipoti nekudyara kuGerman, yechipiri ugari pasipoti kuGerman, yechipiri pasipoti chirongwa kuGerman, chechipiri zvirongwa zvepasipoti kuGerman, vhiza yegoridhe kuGerman, vhiza dzegoridhe kuGerman, zvirongwa zvendarama vhiza kuGerman, chirongwa chendarama vhiza kuGerman, yechipiri visa yegoridhe kuGerman, chechipiri vhiza vhiza chirongwa kuGerman, mbiri yegoridhe visa kuGerman, ugari uye vhiza yegoridhe. kuGerman, kugara uye vhiza yegoridhe kuGerman, mugari vhiza mugari kuGerman, chirongwa chendarama vhiza kuGerman, zvirongwa zvegoridhe vhiza kuGerman.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara kuGerman nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment kuGerman kweResidency nekudyara: EUR 200,000 (Visa yegoridhe kuGerman)
Nhanganyaya Germany uye Residency neInvestment
Sezvo hupfumi hukuru muEurope uye nyika yechipiri yakazara vanhu (mushure meRussia), Germany munhu akakosha kubva kumasangano emari, ezvematongerwo enyika uye ekuchengetedza nyika. Hondo dzeEuropean dzakanyorovesa Germany muhondo mbiri dzepasi rose dzinoparadza muchikamu chikuru chezana ramakumi maviri uye dzakasiya nyika ichibatanidzwa nemauto akunda eAllied eUS, UK, France, neSoviet Union muna 1945. Mukurumbira wakavakirwa paFRG wakazvimisikidza masangano anokosha ekumadokero emari nekuchengetedzeka, EC (parizvino EU) neNATO, ukuwo GDR yemagariro yakanga iri pamucheto weSoviet-yakadzinga Warsaw Pact. Kubva panguva iyoyo zvichienda kumberi, Germany yakadya zvinhu zvakawandisa kuunza kushanda kwekumabvazuva nemubairo kusvika kumadokero emitemo. Muna Ndira 1999, Germany nedzimwe nyika gumi dzeEU dzakapa mari yekuEurope yekutengesa, iyo euro.
Heano akawanda madhora ekuti hupenyu kuGerman hwakanyanya hukuru!
Kuedza kushoma kwekurarama
Mukubatana nenyika dzakasiyana mukati meWestern world, Germany ine mwero kugara. Chirevo chazvino nekambani yekupa mazano yeMercer yakamisa guta guru reBerlin seguta regumi nenhanhatu rinodhura kwazvo kubva pamazana maviri akayerwa pasi rese. London panguva iyi yaive nhamba yegumi nembiri, nepo nhatu nzvimbo dzekuSwitzerland dzemadhorobha - Zurich (106), Geneva (200), naBern (12) - vakaita gumi rakanakisa.
Kubva pamipendero yakafukidzwa nesinou yeAlps kumaodzanyemba kusvika kune jecha rakanaka remahombekombe egungwa kuchamhembe, Germany ine maonero akawandisa.
Pane mukana wekuti iwe unogara muBerlin, iyo sandstone bluffs yeSaxonia Switzerland inoita yakanaka yekunze chinangwa. Kutandarira chinhambwe chipfupi kubva kuMunich uye iwe unogona kusvetukira mukati memvura inokosha yematombo yeLake Starnberg. Uyezve, pamukana wekuti iwe unopa kumusoro kuCologne, unogona kuenda nechikepe kuburukira pasi neRhine… uye kushanyira nyika inopembererwa waini sezvaunoenda.
Kuwedzeredza chitima chimiro
Sisitimu yechitima cheGerman pamwe haizove isingadhuri iwe yauchakwira nayo, asi ichokwadi kuti inokurumidza uye yakapfuma.
Kubva kuHamburg kuchamhembe kuenda kuMunich kumaodzanyemba zvinongotora maawa matanhatu. Zvakare, zvisinei kuti uri kuenda pazasi paavhareji pane inokurumidza ICE chitima, iwe unowana mukana wekuzorodza makumbo ako akaneta mune yakasununguka, yakadzikama kamuri iyo yaizove nenzvimbo ine pamusoro pemutsara mumarudzi mazhinji akasiyana.
Kutora misika yeKisimusi
Mumarudzi mazhinji, inguva inoodza moyo yakanaka kana mazuva atanga kukwezva munguva yekukohwa. Zvakare, iyo nguva yechando inogona kunyatsoita seyakanaka darn kwenguva refu kuGerman. Nekudaro, nerombo rakanaka, nzvimbo dzemadhorobha dzinoshandurwa kuita nguva inotonhorera yegore musango mukupera kwaNovember apo Kirisimasi inoratidza inovhenekera nzvimbo yekutarisisa yemadhorobha munyika yese.
Yakawanda yeruzhinji nguva
MuGerman, zviitiko zveveruzhinji hazvienderane nezororo rako repamutemo regore. Uyezve, mashoma nzvimbo anoshamisa akasununguka nemazuva ano kubva.
Chitubu chiri kudunhu rekumaodzanyemba kweBavaria chine zviitiko zveveruzhinji gumi nenhatu gore rega rega. Saka pamusoro pemazuva makumi matatu siya masangano mazhinji kuti ape seyakajairwa, iwe unogona kutarisira kuti mamwe mazuva gumi nemana anobvumidzwa kuti aenderere mberi nekuongorora Germany nenyika dzakapoterera.
Kureruka kwekutsvaga mutsara mutsva webasa
Nekuda kwehupfumi hwakasimba, zviri nyore kuwana mutsara webasa muGerman kupfuura mune imwe nyika yekuMadokero. Kushaya basa kuri padanho repadiki kubva pakubatanidzwazve muna 1990, uye vakapedza kudzidza vane mwaka wakanaka kwazvo waro - ingori gumi muzana yevakapedza kudzidza vanoshanda mumunda wakabviswa pane zvavaifunga.
Mhuri dzakasununguka dzinobatsira
Pane mukana wekuti iwe kubvira kare kare waturika runhare, iwe uri kupemberera shangu, usanetseke! Germany ine zvakawanda zvekuunza patafura iwe zvakare. Iyo Bundesrepublik ine yakasununguka kurongeka kwekufungisisa kwenzanga kwevabereki vasina kusangana. Vanamai vatsva nababa vanogona kugovera yakabhadharwa zororo pakati pavo kwenguva yemwedzi gumi nemana. Zvakare, mukuwedzera, iyo nyika inokubhadhara iwe mari yekutarisira vechidiki vako, kudzamara kusvika poindi yavanosvitsa makore gumi nemasere.
Iwe zvakare unowana nzvimbo yakachengetedzwa kukireshi kubva pazuva iro mwana wako anotendeuka ane gore - uye mari yacho idiki shoma yeavo vari mumarudzi akavakidzana, semuenzaniso, iyo Netherlands.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeGerman
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara kuGerman
EUR 200,000 (Visa yegoridhe kuGerman)
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Jerimani
Kugara nekudyara kweGerman
Bhizimusi bhizinesi vhiza (pfupi-pfupi / refu-refu) / Mvumo yekugara
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweGerman
Mushure memakore masere ekugara
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari vemuGerman
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweGerman
Chengetedza nekugadzira mabasa kuburikidza nechinhu cheGerman mubhizinesi / zvemabhizimusi zviitiko. Mari dzakakosha dzinoitwa mukati.
> Mashini & Midziyo
> Shanduko yehuwandu
> Zvemari Services (kubhengi, inishuwarenzi)
> Zvemagetsi & Micro-tekinoroji
> Maindasitiri evatengi
> Kutumira / Maritime
> Zvemagetsi & Aviation
> Dhijitari Ehupfumi
> IT Indasitiri (software, data uye kubvunza)
> Makemikari & Zvishandiso
> Hupenyu Sayenzi
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweGerman
Germany, maererano nezvematongerwo enyika, simba rehupfumi uye tarisiro yebhizimusi, ndiyo imwe yenyika dzakakosha pasi rese. Ndiyo nyika yakakura kwazvo muWestern Europe ine masisitimu akasarudzika, dzidzo, hutano uye magariro uye inhengo yepakati peEU nedunhu reSchengen. BYou uye nhengo dzemhuri yako muchawana ugari hweGerman mukati menguva pfupi yekudyara mubhizinesi reGerman, zvichikupa mukana wekubvisa vhiza kumatunhu ese ari mudunhu reSchengen uyezve kune dzimwe nyika dzeEurope. Izvo hazvidiwe kuti ugare mumuviri, uye uchave unokodzera kuve mugari mushure memakore mashoma ekugara.
Kufamba kwemhuri kuGerman
Pasina zvimwe zvekudyara zvinodiwa, iwe unogona kuwedzera mabhenefiti emvumo yako yekuGerman yekugara kunhengo dzako dzemhuri dzepedyo, kusanganisira wawakaroorana naye uye vana vadiki. Iwe unonyorera mvumo yekuzvimirira inoenderana nekubatana kwemhuri kune vako vadikani panongopihwa ugari hwako.
Kugara nehurongwa hwekudyara kuGerman kukurudzira
Iwe uchafanirwa kunyora kuti iwe unayo mari yekudyara yauinayo uye kuti iwe wakachiwana zviri pamutemo. Iwe zvakare unofanirwa kuve nemari yekuzvitsigira iwe nemhuri yako, pamwe neinishuwarenzi yekurapa kweinosvika EUR 30,000. Mushure mekupedza zvese zvinyorwa uye paine sarudzo yekuti mari yako inobatsira nyika yose kana dunhu, mvumo yako ichapihwa mukati memwedzi 6-8 chete. Chibvumirano chinokupa iwe kodzero dzakaenzana sevagari vemuGerman, kunze kwekugona kuvhota musarudzo dzeparamende uye kukwikwidza.
Kana iwe uine makore mashanu zviri pamutemo kugara muGerman, unogona kunyorera kugadzirisa.
Mari inodiwa kuGerman
Chinodiwa chekuwana kugara kweGerman kunoenderana nekudyara ndechekuti bhizinesi rako rinobatsira zvakanyanya kudunhu kana nyika yese. Semutemo wechigumwe, iwe unotarisirwa kuisa mari yeEUR 1 miriyoni mukambani yeGerman (nyowani kana iripo), uye kugadzira nekuchengetedza mabasa gumi kumarudzi ekuGerman uye kuve nemubatsiri wemuno pachikumbiro chako hazvidiwe.
Kutsigira kwevatengi kweResidency nekudyara kweGerman
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents kuGerman uye Residency ne Investment Lawyers yekuGerman inopa vatengi uye mhuri dzavo kuGerman nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuGerman, kugara nekudyara kubva kuGerman nedzimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haangogumirwi ekugara nekudyara kubva kuGerman kana Golden Visa kubva kuGerman kana ugari nekudyara kubva kuGerman kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara dzimba kubva kuGerman, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Germany kana kumahombekombe egungwa, zviwanikwa zvevanhu kuGerman nezvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuGerman uye sekondari pekugara.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari veGerman:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara kweGerman, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yekuGerman, inokwanisika inivhesitimendi inosvika kune vanoenda kune dzimwe nyika vanokumbira kuGerman, inokwanisika Residency nevarairidzi vezvekudyara kuGerman, inokwanisika Residency nemagweta ekudyara kuGerman uye inokwanisika yekuenda kune dzimwe nyika kubvunza yakasimba kuGerman.
Kugara nekudyara kubva kuGerman kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza kuGerman kuenda ku37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuGerman kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuGerman kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuGerman kuenda ku106 Nyika.
Kugara nehurongwa hwekudyara kubva kuGerman.
Goridhe visa zvirongwa kuGerman kuenda ku37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuGerman kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuGerman kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuGerman kuenda ku106 Nyika.
Kugara neInvestment yeGerman kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa kuGerman nemaonero ekuti mutengi anofanira kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara kuGerman, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kuGerman. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi kuGerman vane rekodhi rekodhi uye yavo midziyo iri munzvimbo dzakanaka kuGerman, vachitora zvakanakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveGerman nemari yekudyara muzvivakwa kuGerman.
Unoda kuziva - Germany Kugara neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuGerman kunopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa zvekubudirira kwako Kugara nekudyara kuGerman. Yedu yakajairwa masevhisi eResidency neInvestment kuGerman inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuGerman kana kuenda kuGerman, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Kugara nekudyara kuGerman kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeGerman uye kudzora njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kuGerman, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi neResidency yako nekudyara kunyorera kuGerman isu tinoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuGerman. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kweGerman uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveResidency nekudyara kunyorera kuGerman zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvine chekuita neGerman.
Kamwe kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweGerman chabvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara kuGerman kune vakataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi kuGerman:
Residency nebasa rekudyara kuGerman hazvipi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovanisa zvombo uye zvombo kubva kana kuGerman.
Residency nemapurogiramu ekudyara kweGerman hazvipi kupihwa kweTechnical surveillance kuGerman kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuGerman.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweGerman hadzipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muGerman.
Residency nerutsigiro rwekudyara yekuGerman hazvisi zvevanhu vanobata maGenetic zvinhu kuGerman.
Residency nebasa rekudyara kuGerman haisi yemabhizimusi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya kuGerman.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweGerman haruwanikwe kune vanhu veGerman vanobata mukutengesa, kuchengetedza kuGerman, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yekuGerman haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yekuGerman haisi yezvitendero uye masangano avo kuGermany.
Residency nebasa rekudyara mu Jerimani haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira kuGerman.
Kugara Kwedu magweta kuGerman haitsigire bhizinesi rekutengesera mune zvekushandisa zvinodhaka kuGerman.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika yekugadzirisa zvinyorwa zve AML zvevatengi veGerman neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera zveGerman kubvumidzwa kwekunyorera Residency nekudyara kuGerman.
Kugara nekudyara kuGerman nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro kuGerman kwekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa kuGerman.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa nemutemo zveGerman, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kuGerman inopa mitengo yakachipa, iine mukana wakanakisa wekubudirira kweGerman.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuGerman kutsigira vatengi uye mhuri dzavo kuGerman.
Zvakaitika Kugara nevekutsvaga mari kuGerman nevamiriri vezvemutemo kuGerman vanopa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veGerman kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuGerman uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuGerman
Isu tine ruzivo rwepasi rese muResidency nekudyara kusanganisira Germany, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuGerman kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuGerman
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kuGerman ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veGerman, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweGerman uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yekuGerman
Maitiro Ekubvumirwa kweGerman
Kwekugara kwenguva pfupi muGermany
Permanent Residence kuGerman
Embassies uye ma Consulates eGerman
Kugara neInvestment kuGerman uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa kuGerman kune izvozvi kana zvichauya zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuGerman nekudyara mari, isu semumwe wako kuGerman, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda kuGerman nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kuGerman, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare kuGerman, ayo ausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano eGerman kutiita shopu-yekumira yeGerman nenyika dze106.
"Takaisa makore ekuyedza uye pasi rose muZuva 106 kubatsira mhuri, vanhu, uye mabhizimusi kuGerman mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kuGerman nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-kumusoro kuGerman nepasirese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani kuGerman kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani kuGerman yakachipa nesu.)
Chero ani investor anotamira kuGerman angazoda akaundi yebhangi wega kuGerman uye account yebhangi yekambani kuGerman, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara kuGerman
Kana iwe uchida kubvunza kuGerman, ye mhinduro dzemadhijitari kuGerman senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi kuGerman kana crypto mhinduro, tizivisei.
Mushure meResidency nekudyara ku Germany kana iwe uchironga ku tanga bhizinesi nekutenga riripo bhizinesi kuGerman kutanga pakarepo muGerman.
HR Services kuGerman
Our kambani yevashandi kuGerman inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo munzvimbo yeGerman vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeGerman
Bhizinesi foni masystem eGerman pamwe ne nhamba dzeGerman Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muGerman
Accounting, kushingairira kwakakodzera kuGerman uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero kuGerman
Setup bhizinesi kuGerman
Mushure meResidency nekudyara kuGerman, setup bhizinesi mu Jerimani.
Isu tinopa pazasi zvataurwa IT mhinduro kuGerman
Kugadzira Webhu kuGerman
Ecommerce Kuvandudza kuGerman
Webhu kuvandudza kuGerman
Kuvandudza kweBlockchain kuGerman
App Kubudirira muGerman
Software Kubudirira kuGerman
Magweta e Residency neInvestment kuGerman
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuGerman uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuGerman, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeGerman ine vamiririri vekunze vanoenda kuGerman, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sevhisi yeGerman ne kujekesa zvine hungwaru mhinduro dzekudyara kweGerman vanhu nemhuri dzavo. Kugara kwedu neboka rekudyara kuGerman kunopa mhinduro dzakagadziriswa dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuGerman, pamvumo yako yekugara kuGerman yakatenderwa.
Simba regweta reGerman rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara kuGerman. Kana iwe uri kuGerman kana kuronga kushanyira Germany, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kuGerman kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeGerman. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weGerman.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment kuGerman
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara kuGerman?
Kugara nekudyara kuGerman, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweGerman kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGerman kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuGerman, ugari nechirongwa chekudyara kuGerman. inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kweGerman, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara kuGerman, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara kuGerman uye kugara kwakanyanya nevanoona nezvekudyara kuGerman, vachishanda zvakanakisa kugara nevamiriri vezvekudyara kuGerman, uye mafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. kuGermany.
Kugara nemabasa ekudyara kuGerman | Kugara nevamiriri vezvekudyara kuGerman | Kugara nemagweta eInvestment kuGerman | Kugara nemagweta ekudyara kuGerman | Kugara nevanoona nezvekudyara kuGerman
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara kuGerman?
Ugari nekudyara kuGerman, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweGerman kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGerman kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe kuGerman. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuGerman, ugari nehurongwa hwekudyara kweGerman inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuGerman, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara kuGerman, ugari hwakanakisa nemagweta ezvekudyara kuGerman uye ugari hwakanakisa nevanoona nezvekudyara kuGerman. kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara kuGerman, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda munyika.
Affordable Investor immigration services kuGerman | Vanodhura vanotamira kune dzimwe nyika vanokumbira kuGerman | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika kuGerman | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta kuGerman | Vanodhura varimi vanoona nezvekupinda kune dzimwe nyika kuGerman | Affordable immigration law firms kuGerman
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri kuGerman?
Yechipiri pasipoti kuGerman, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weGerman kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGerman kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuGerman, yechipiri pasipoti chirongwa cheGerman chakatsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eGerman, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti kuGerman, magweta echipiri epasipoti kuGerman uye akanakisa echipiri mapasipoti eGerman, vanoshanda kumahofisi echipiri epasipoti kuGerman, uye akanakisa mafemu ekubvunza vanoenda kune dzimwe nyika kuGerman.
Chechipiri pasipoti masevhisi eGerman | Chechipiri pasipoti vamiririri kuGerman | Yechipiri mapasipoti magweta kuGerman | Yechipiri mapasipoti magweta kuGerman | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuGerman
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa kuGerman?
Ndarama vhiza kuGerman, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara kuGerman kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGerman kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvisungo zvehurumende, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuGerman, chirongwa chendarama vhiza yeGerman inotsigirwa ne goridhe vhiza masevhisi kuGerman, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe visa magweta kuGerman, akanakisa egoridhe vhiza magweta kuGerman uye akanakisa egoridhe vhiza varairidzi kuGerman, vanoshanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri kuGerman, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu kuGerman.
Ndarama vhiza masevhisi eGerman | Ndarama vhiza vamiririri kuGerman | Magoridhe vhiza magweta kuGerman | Magoridhe vhiza magweta kuGerman | Goridhe vhiza varairidzi veGerman
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara kuGerman?
Minimum Investment yeResidency nekudyara kuGerman ndeye 200,000 EUR (Golden visa kuGerman).
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuGerman kune Residency nekudyara?
Ehe, gweta redu kuGerman nevamiriri kuGerman vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara kuGerman.
Kugara nekudyara kuGerman kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuGerman uye Residency nemari yekudyara zvinodiwa kuGerman ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubhadharisa fizi yeResidency neInvestment kuGerman, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveResidency neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuGerman kana investor visa kuGerman?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuGerman kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuGerman kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuGerman kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuGerman kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuGerman kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuGerman kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuGerman kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuGerman kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuGerman kubva kuNepal, Residency nekudyara kuGerman kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuGerman kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yekuGerman
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuGerman
Mazwi akakosha muRudzi rwekugara neInvestment yeGerman
Federal Ministry yehutano- www.dziro.bund.de
Federal Ministry yeEconomics neMagetsi- www.engako.de
Federal Ministry yehupfumi Kubatana uye Kubudirira- www.engiro.de
Federal Ministry yeZvekudya nekurima- www.zviro.de
Federal Ministry yeJustice uye Kudzivirirwa Kwevatengi- www.engiro.de
Federal Ministry yeMari- www.wahbidama.com.br
ChiGerman Kunze Hofisi- In www.auswaertiges-amt.
Federal Ministry yeImukati- In www.bmi.bund.
Federal Ministry for Employment uye Zvemagariro Nyaya- www.bmas.de
Federal Ministry yeFamily Affairs, Vakuru Vagari, Vakadzi uye Vechidiki- www.dziro.de
Federal Ministry yeDziviriro- www.bbom.de
Federal Ministry of Transport uye dijitari Zvivakwa- www.bmvi.de
Federal Ministry of Education uye Ongororo-www.bbf.de
Federal Ministry yeZvakatipoteredza, Zvisikwa Kuchengetedza, Kuvaka uye Nyukireya Kuchengeteka-www.engiro.bund.de
Link to Dhipatimendi Rekupinda muGerman , vane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Immigration kuGerman